တပ်သားလေးအား ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » တပ်သားလေးအား ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပီ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Mar 7, 2012 in Complaint / Claim | 16 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နှုတ်ဆက်သည့် တပ်မတော်သားအား စစ်တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကလောမြို့ ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နှုတ်ဆက်လိုက်သဖြင့် ဖမ်းချုပ်ခြင်းခံရသည့် တပ်မ ၅၅ မှ တပ်သား ကျော်ဇင်ဝင်းအား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်တိုင်းမှူး ကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ အချုပ်မှ လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကလောမြို့ လုံခြုံရေး သတင်းရပ်ကွက် အဆိုအရ သိရှိရသည်။
ဒါမှလဲ ရှင်းရောဗျာ။တပ်မတော်ထဲမှာလဲ အာဏာပေါ်တပ်မက်သူတွေ မကုန်သေးဘူး။အရင်ခေတ်လို
မှတ်နေတယ်ထင်တယ်။ကျနော် အမြဲပြောခဲ့သလို တပ်မတော်ပေါ်မယုံနိုင်ဘူးလို့ ။ခုလဲကြည့်ပါအုံးဗျာ။
ဘယ်လောက် ရုပ်ပျက်သလဲ။ခက်တော့နေပီ။ဒီလောက်ထိ အကျင့်ပျက်နေတဲ့ တပ်ထဲက အာဏာရှင်တွေ
အပေါ် ဘယ်တော့မှဖြင့် ယုံရမလဲဗျာ။
နောက်တမှု ထပ်မကပ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပါ၏.. မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်…။ သဘောရိုးနဲ့ လွှတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းသာပါ၏… အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ခြေလှမ်းတလှမ်းအဖြစ် ကတ်မတော်မှ ယူဆပါ၏။ ဤအတိုင်း ဆက်သွားပါက မကြာခင် တပ်မတော် နှင့် ကတ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြန်လည်စတင်ဖွယ်ရာ ရှိကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာန သတင်းတရပ်အား ကိုးကားဖေါ်ပြပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ၊ ကိုကျော်ဇင်ဝင်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက် ဝမ်းသာရပါ၏ ။
နောင်လည်း ယခုလို အဖြစ်မျိုး ထပ်မံ မဖြစ်လောက်တော့ပါဘူး ဟု မျှော်လင့်မိပါ၏ ။
မမသဲနုအေး ပို့ စ်ကနေ ပြန်ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းက ဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ အမှန်က………
တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းနှင့် သတင်းမှန် ဖုံးဖိလှည့်စားမှု
ဒီနေ့ Facebook မှာ တပ်မတော်သားကျော်ဇင်ဝင်းဟု အမည်ရသော ရဲဘော်တစ်ယောက်အား ဒေါ်စုကြည်ကို ကြိုဆို၍ အထိုးကြိတ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အောက်မှာလည်း တိတိကျကျသိလိုလျှင် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပြီး ကိုဖိုးချိုထံသို့ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပါနေလို့ ကျွန်တော်အဲဒီဖုန်းကို ချက်ချင်းပဲ ဆက်ပြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာ ပြင်ပသို့ ဆိုပြီးပဲ ပြန်ပြောနေပါတယ်။မကျေနပ်လို့ နောက်တစ်နာရီခြားပြီးမှ ထပ်ခေါ်လဲ ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာ ပြင်ပသို့ လို့ပဲ ထပ်ဖြစ်နေတာကြောင့် မသင်္ကာတော့ပဲ တိုက်ရိုက် မေးကြည့်ချင်သောကြောင့် အောင်ပန်းGEတပ်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲဘော် ဆီဖုန်းဆက်မေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတပ်မှာ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဆိုတာ မရှိကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စအား တင်ဖြေရှင်းတင်ပြရန် တပ်မှုးမှ စီစဉ်နေကြောင်းလဲ သိရပါသည်။
ကျနော်ကတော့ ပုံကို ကြည့်ပြော ရမှာပဲခင်ဗျ.. GE တပ်သည် သူတို့ အင်ဂျင်နီယာ တံဆိပ်ပဲ တပ်တယ်.. တပ်မ နံပါတ်ကို တပ်တာက ခြေလျှင် တစ်ခုပဲ.. နောက်ပြီး တပ်မ ၅၅ သည် တပ်မတပ်မလုံး ရှေ့တန်း မထွက်ရသေး သောကြောင့် ရဲဘော်တွေ အခုလောက် ဆံပင်မရှည်ဘူး.. နောက်တန်းနေတဲ့ တပ်တွေမှာ တပတ်တခါ ဆံပင်ညှပ်မညပ် စစ်ပါတယ်.. တပ်မ ၅၅ လက်မောင်း တံဆိပ်ကြီးနဲ့ GE တပ်ကလို့ ပြောကတည်းက စ မှားနေပါတယ်။
Hlaing Min Nyo : တပ်သားရဲ့လက်မောင်းကဘက်ဟာ GE မဟုတ်ပါဘူး ခြေလျင်တပ်မ ၅၅ ရဲ့ဘက်ပါ နဲနဲစဉ်းစားပြီးမှ ၀ါဒဖြန့်စေလိုပါတယ်……. စော်ကားလိုခြင်းအလျဉ်းမရှိ ပါဘူး…… မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရင် ပိုစ့်တင်တဲ့သူသိက္ခာကျတတ်ပါတယ်…
Sai Thein Win : ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. ကျနော်လည်း သတိထားမိပါတယ်.. ဟိုဖက်လက်မောင်းတံဆိပ်ကို အကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်မှ ဘီအီးဖူး တွေ့ရတာ.. ၅၅ လက်အောက်ခံ ဂျီအီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်..
Sai Thein Win : ဘီအီး/ဂျီအီး/အီးမီး/ဆစ်ဂ်နယ် တပ်တွေက တိုင်း/တပ်မ လက်အောက်ခံဆိုရင် တိုင်း/တပ်မ ဘက်တံဆိပ် တစ်ဖက် ကိုယ့် ဒါရိုက်ထရိတ် တံဆိပ်က တစ်ဖက် တပ်ရပါတယ်.. စစ်ကျောင်းကြီးတွေ ကပစတွေကျတော့ တိုင်း/တပ်မ လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အတွက် လက်မောင်းတံဆိပ်နှစ်ဖက်လုံးက ကိုယ့် တပ်တံဆ်ိပ် ဖြစ်ပါတယ်..။
Htet Aung : (သတင်းအဆင့်အတန်းအတွက် ကန့်ကွက်ပါတယ်…)
Htet Aung : အင်တာနက်မီဒီယာလောကမှာ ဖွတာကတော့ လူတိုင်းဖွလို့ရတယ်..။ သတင်းစာကျင့်ဝတ်၊ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းအဆင့်အတန်းက အင်မတန်မှ နိမ့်ကျလွန်းပါတယ်..။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေးထားတဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်ဝတ်နဲ့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင် မိမိအခွင့်အရေးက အလိုလို ပျောက်ဆုံးမှာ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိမိရဲ့ သတင်းထောက် အရည်အသွေးလည်း ဆက်လက်ကျဆင်းနေမှာဖြစ်တယ်…။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က ယိုင်နဲ့နေမှတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံလည်း သွားမနေပါနဲ့တော့ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပဲ နေလိုက်တာကောင်းပါတော့တယ်..။
Sai Thein Win : အောင်ပန်း ဂျီအီးတပ်ကိုသာ ဆက်သင့်ပါတယ်.. ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဖုန်းကို ဆက်ပြီး သတင်းကို confirm လုပ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး.. post တင်တဲ့လူကလည်း professional မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒါကတော့ YPI က တက်လာတဲ့ သတင်းပါ.. ရဲဘော်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးပုံပါပါတယ်.. ယူနီဖောင်းလည်း အပြည့်အစုံ ဝတ်ထားပါတယ်.. အပေါ်က စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ အောက်က ဂျင်းဘောင်းဘီဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး..။
ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့ အောင်နိုင်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့က စကားပြော စင်မြင့်၏ လက်ယာဖက်တွင် စစ်ယူနီဖေါင်းနှင့် ရဲဘော်လေး တစ်ယောက် လာရောက်နားထောင်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ထိုရဲဘော်ကလေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ကို ရိုက်ကူးထားခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံများသည် အင်တာနက် ဖေ့(စ)ဘွတ်စာမျက်နှာများတွင် ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီး ထိုရဲဘော်လေး ဖမ်းဆီးခံထားရသည်ဟူသည့် သတင်းများပြန့်နှံ့နေခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းများအရ ဒေသခံတစ်ယောက်က YPI သို့ဆက်သွယ်ပြောကြားရာတွင် ထိုနေ့တွင်လာရောက် နားထောင်ခဲ့သော ရဲဘော်လေးသည် ကလောမြို့မှ တပ်မ၅၅ လက်အောက်ခံ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဖြစ်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားမှု၊ တပ်စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်မှု စသည့်စွဲချက်တို့ဖြင့် တပ်ချုပ်ရုံးခန်းသို့ ဆင့်ခေါ်ထားခံရသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ယူနီဖောင်း အပြည့်နှင့် တပ်သား ကျော်ဇင်ဝင်း (Thway Thit Sar ကိုးကားတဲ့ သဘာဝမြေ က ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိရတဲ့လူ ပြောသလို အပေါ်ပိုင်း စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး အောက်ပိုင်းက ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားတာ မဟုတ်ပါ..။)
ကတ် တောင်မတော်ဘူးဆိုတော့ အင်းးးးးးးးးး
လူ့ အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှု၊ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ 
ဝမ်းသာစရာ၊ကြိုဆိုစရာ သတင်းပါဗျာ။နစ်နာသူ တပ်သား
ကောင်းပါလေ့။ ကောင်းပါလေ့ 
တိုင်းမှူးတွေ၊ တပ်ရင်းမှူး တွေ အပါအဝင် တပ်ထဲ မှ လူတိုင်း လူဆိုးကြီး တွေ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
သူတို့ တွေ လဲ စနစ် ရဲ့ သားကောင် တွေ ထဲ က အမျိုးအစား တစ်မျိုးပါဘဲ။
တပ်သားလေးပြန်လွတ် ပါတာ ကို အတိုင်းမသိ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးလဲ အန္တရာယ်ကင်းကာ သူ့ရဲ့ ဘဝ အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မမခင်လတ် ပြောတာလဲ မငြင်းပါဘူးဗျာ။စနစ်မကောင်းတော့ လူပါမကောင်း
yiioရေ……တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းလို အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် တပ်ထဲမှာ
တွေ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်နေတာတွေရှိနေသေးတယ်ဗျာ။ကယ်တင်နိုင်မှ တော်
ကဲ……….. ကျွန်တော်ပြောတယ် အမှန်ပါလို့ ………. ဒီတစ်ခါလည်း မီဒီယာအင်အားနဲ့ တိုက်လိုက်နိုင်တယ်ပြောရမယ် ……… ။ သဘာဝမြေဆိုတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က ဘယ်လောက်အူတဲ့ဆိုက်ဆိုတာ ၀င်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကောင်းကြောင်းရေးတဲ့ ဆိုက်ပါဗျာ။ အဲ့ဒီဆိုက်က သတင်းကို စကားလုပ်ပြီးပြောတာပဲ အံသြပါတယ်။
တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းကို ပြန်လွှတ်လိုက်တာ မဟုတ်သေးဘူးတဲ့..။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ပြောမှ ယုံကြည်ရပါတော့မယ်။ သစ်ထူးလွင်မှာ ဒီနေ့တက်လာတဲ့သတင်းပါ..။ မျက်ခြေမပြတ် စုံစမ်း သတင်းတင်ပေကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်..။
Browse › Home › မြန်မာ့သတင်း » တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်း၏နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နှုတ်ဆက်သည့် တပ်မတော်သားအား စစ်တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဟုကြားသိရ၍ ကလောNLDလူငယ်များကသွားရောက်တွေ့ဆုံရာ မတွေ့ရှိခဲ့ရပဲ တပ်သား ကျော်ဇင်ဝင်းအား အင်းကောင်းအမြောက်တပ်၏မြေအောက်ခန်းထဲတွင် ပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ခံထားရပြီးအသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရိမ် ရသည့်အခြေအနေဖြစ်နေသည်ဟုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရသည်ဟု YPI သို့ပြောပါသည်။
အင်းကောင်းအမြောက်တပ်၏တပ်ရင်းမှုးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြ၀င်းဖြစ်ပြီးလာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်လောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်။
တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းအားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည့်ကိစ္စအားကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ဖြေရှင်းပေးပါရန်၊ အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးထားခြင်းမဟုတ်ပါကလည်း
ခက်တယ်ဗျာ။ယုံကြည်လို့ ကိုမရသေးဘူး။ကျနော်လဲ ဖတ်ပြီးပီဗျ။ခဏကမှတွေ့ 
လို့ ။ခုလိုပြောပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ဦးကြောင်ကြီး။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီနေ့မှ ဒီသတင်းကိုတွေ့ တာပါ။
ပြန်လွှတ်တယ်ဆိုတာ … မယုံပါဘူး … ။ ခုနကပဲ … ဘယ်ဆိုက်မှာလဲ မသိဘူး ..တွေ့လိုက်သေးတယ် … အသက်အန္တရာယ်ပါ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေလို့ ရေးထားတယ် … ။
သတင်းတွေကလည်း … လုံးဝကို .. ပေါက်ပန်းလေးဆယ်ချည်း ဖြစ်နေတော့တာပဲနော် … ပထမတစ်ခါတုန်းကတော့ စစ်သား မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်နဲ့ .. ဒွိဟဖြစ်တယ် .. အခုလည်း လွှတ်တယ် မလွှတ်ဘူးနဲ့ ဒွိဟပဲ .. ဘယ်သူကမှလည်း … တိတိကျကျပုံနဲ့ တကွ မပြောနိုင်သေးတာ … ခက်တယ် … ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြားရတဲ့ သတင်းတစ်ခုပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် …. လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းမိပါတော့တယ် …. ။
ခုလို တပ်သားလေးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ မေတ္တာမထားနိုင်တဲ့ တပ်မတော်အပေါ် မယုံကြည်နိုင်တော့
ဘူး။ခွင့်လွှတ် သီးခံပေးမယ်ကိုမရှိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းဆို ရင်အောက်ခြေက စစ်သားတွေအပေါ်ဘယ်လို ထိန်းချုပ်
တော့မလဲ။ဘယ်လို တပ်စည်းကမ်းလဲဗျာ။လူတစ်ယောက်ကို တရားမဲ့နှိပ်စက်ဖို့ လိုင်စင်ပေးထားသလိုဖြစ်နေပီ။
အစဉ်အလာ တိုင်းစည်းကမ်းမဲ့သော တပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ချီတက်လျှက်……